Global Voices teny Malagasy » Kyrgyzstan: Leo Hetsi-panoherana? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Marsa 2018 6:34 GMT 1	 · Mpanoratra Asel Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kyrgyzstan, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Ampahavitrihana no nandalinan'ireo blaogera ny fanapahan-kevitry ny governemanta Kyrgyz mba hanao ny 24 Martsa – andron'ny fikomiana malaza tamin'ny 2005 – ho fety nasionaly iray. Fanitsiana natao tamin'ny Lalàna mifehy ny Asa Kyrgyz, izay milaza manomboka izao fa ny 24 martsa dia ho andro ofisialy hankalazaina toy ny Andron'ny Revolisionan-Bahoaka. Ratsy be ny fanehoankevitra avy amin'ny tontolom-bolongana Kyrgyz amin'ny ankapobeny.
Manoratra  tsikera hafahafa i Altaidan, manao resaka tsy loa-body mikasika an'ireo korontana nanaraka ilay revôlisiôna telo taona lasa izay [ru]:
Koa, rahoviana izany isika no hankalaza ny Andron'ny Marauding? Sosokevitro ny hoe manao lalàna vaovao ny filoha mba hahafahantsika mankalaza an'io ho andro tsy fiasana koa.
Manamarika  i Greis [ru] fa:
Daty politika fotsiny io andro tsy fiasana io! Tsy hanaiky an'io ho andro tsy fiasana ny fiarahamonina!
Tena malahelo i Nessa_ly mahatsiaro  ireo fihetsehampony avy amin'ilay korontana:
Hmm… tena mahatsikaiky maha-te-hitomany… taorian'ny revolisiona nizotra tamin-dranomaso tao an-tanàna aho.
Efa mikasika momba ireo hetsi-panoherana ihany, nanoratra  lahatsoratra tsara be teo amin'ny vavahadin'ny blaogy Kloop  i Bektour Iskender sy Anna Yalovkina, mikasika ilay hetsi-panoheran'ny fanentanana “Tsy Mino aho” izay natao tamin'ny 17 Martsa tao Bishkek [ru].
Manohitra  ireo valin'ny fifidianana parlemantera tamin'ny taona lasa ireo mpanao fantenanana, nandritra ny efa volana maromaro sahady, ka mpandray anjara maro no voasambotra isaky ny mivoaka eny andalam-be izy ireo amin'izao fotoana izao, ary isaky ny manao hetsi-panoherana ry zareo dia entina any am-ponja ireo mpandray anjara.
Nandefa sary vitsiitsy mikasika ilay hetsi-panoherana ireo mpanoratra ary nanolotra tantara fohy avy tamin'ireny fanentanana ireny. Nohazavain’ ny manamboninahitra milisy Taalaibek Shatmanov ny momba ny fitazonana am-ponja, hoetsy ara-dalàna ny fihetsiketsehana ary tsy ankasitrahan'ireo olompirenena izany.
Mirona mankany amin'ny fanekena an'ireo fisamborana ireo blaogera sasantsasany. I Seo manaiky  [ru] fa:
Raha ny marina, izao no tena zava-misy – leo hetsi-panoherana ireo mponina ao an-tanàna.
Angamba, ho fanamafisana an'ireo teny ireo, manintona ny saina kokoa ireo lohahevitra hafa ao anatin'ny tontolon'ny bolongana kirghize. Tamin'ny herinandro lasa teo, nampiantrano  ny Billiards Grand Prix Eurasia 2008 [ru] i Bishkek renivohitr'i Kyrgyzstan. na dia tsy tafita tamin'ny fifaninanana aza i Kanybek Sagynbaev, ilay tompondaka eran-tany, faly ireo vahoaka Kyrgyzstan nijery ny lalao:
“Tena faly aho fa natao teto amin'ny firenentsika ny karazana hetsika sahala amin'io ,” hoy  i Svetofor_kg [ru].
Ankoatra izay, Nanomboka tao Bishkek ny Spring Fashion Week. Nampirantiranty ny karazan-damba landihazo avy ao amin'ireo mpampihaingo eo an-toerana ireo lasibika Kyrgyz mahafinaritra. Elena Skochilo, iray amin'ireo blaogera fantadaza indrindra ao amin'ny firenena, no naka  sary tsara tarehy mikasika azy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/28/116266/
 no naka: http://morrire.livejournal.com/434662.html